पोखराबाट केन्पो खुकुरी नेशनल च्याम्पिनसीप प्रतियोगिताको घोषणा - Pokhara Post
युवा नेता दिपक वीर कुँवरले गरे कांग्रेसको कास्की ३ (ख) को सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा
पोखरा । पोखराबाट केन्पो खुकुरी नेशनल च्याम्पिनसीप प्रतियोगिताको घोषणा गरिएको छ । शनिबार पत्रकार सम्मलेन गरी सो प्रतियोगिताको घोषणा गरिएको हो । प्रतियोगिता आगामी असोज ८ र ९ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ । यसअघि जेठ महिनामा बुटवलमा आयोजना गर्ने भनिएको नेशनल च्याम्पिनसीप कोरोना भाइरस महामारीका कारण स्थगित गरिएको नेपाल केन्पो खुकुरी मार्शल आर्टस् संघ केन्दीय समितिका अध्यक्ष पूर्ण पाण्डेले जानकारी गराए । उनले आगामी भदौ १ गतेदेखि केन्पो खुकुरीको प्रशिक्षक प्रशिक्षण संचालन गरिने बताए ।
प्रतियोगितामा ७ वटै प्रदेशबाट खेलाडी छनोट गरिने उनले बताए । ‘जिल्लास्तरको प्रतियोगिता अहिले भइरहेको छ । सो प्रतियोगिता सकिएपश्चात प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता गर्छौं । ७ वटै प्रदेशबाट छानिएका खेलाडीहरुले नेशनल च्याम्पिनसीपका लागि भिड्नेछन् ।’, उनले भने ।
अध्यक्ष पाण्डेले प्रतियोगितामा २० देखि ३० वर्ष उमेरसमूहका महिला पुरुष खेलाडीको सहभागिता हुने बताए । उनका अनुसार प्रतियोगितामा विजयी हुने खेलाडीलाई नगद एक लाख रुपैयाँ र पदक सहित पुरस्कृत गरिनेछ । यस्तै उपविजेताले नगद २५ हजार रुपैयाँ र पदक प्राप्त गर्नेछ । करिब ३ सय खेलाडी क्लोज क्याम्पमा बसेर प्रशिक्षण लिइरहेको भनाइ उनको छ । एक स्थानीय निकायमा एक सय खेलाडी उत्पादन गर्ने गरी संघले आफ्नो गतिविधिलाई तिव्रता दिएको पाण्डेले बताए ।
उनले अहिले सम्म राज्यबाट वा बाह्य संघसंस्थाबाट रकम लिएर आफुहरु परिचालित नभएको जानकारी गराए । संघमा आबद्ध भएका सदस्यहरु मार्फत नै रकम उठाएर कार्यालय संचालन गरिरहेको भनाई उनको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद(राखेप) मा आबद्ध संस्था भएकाले आगामी दिनमा भने राज्यसँग पनि समन्वय गरी खेलकुदका गतिविधिलाई निरन्तरता दिने योजनामा संघ रहेको उनले बताए । केन्पो एक मार्सल आर्ट भित्रकै खेल भएको पाण्डेले बताए । नेपालीको सान खुकुरीको प्रचारप्रसारमा टेवा पु¥याउन उक्त खेल मार्फत मदत पुग्ने विश्वास उनको छ ।
नेपाल केन्पो खुकुरी मार्शल आर्टस् संघको गठन भएको चार वर्ष पुग्यो । यसघडि संघले संगठन विस्तारलाई तिव्रता दिएको छ । संघका सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख सुरेन्द्र गुरुङले हालसम्म गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा संगठन विस्तार गरिएको जानकारी गराए । प्रदेश मातहतका जिल्लामा समेत संगठन विस्तार भएको र आगामी दिनमा ७७ वटै जिल्लामा संगठन विस्तार गर्ने योजनामा संघ छ । गुरुङले नेपालका लागि केन्पो नयाँ खेल भएकाले अहिले आफुहरुले खेलाडी उत्पादनमा जोड दिएको बताए ।
नेपाल केन्पो खुकुरी मार्शल आटर्स केन्द्रीय संघको पोखरामा बसेको चौथो विस्तारित बैठकले गण्डकी प्रदेशको नयाँ कार्यसमितिको अध्यक्षमा विष्णु पुन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज खड्का, उपाध्यक्ष तारा शर्मा, उपाध्यक्ष शान्तसिंह बस्नेत, उपाध्यक्षमा खेम गुरुङ, उपाध्यक्षमा हरिराज कोइराला, महासचिवमा सन्दीप कोइराला, सचिवमा, विष्णु पोखरेल, कोषाध्यक्षमा पुरुषोत्तम पौडेल र सदस्यहरुमा दिपेन्द्र शर्मा, गोविन्द भुसाल, विष्णु हरि भुगाई, श्रीकृष्ण पौडेल, दिनेश केसी, बल बहादुर सुनार (अमन), दिपेन्द्र अधिकारी, ऋषि बस्नेत, मोहम्मद जुमार अलि रहने निर्णय गरेको छ । कानुनी सल्लाहकारमा कुञ्जनी परियार ‘प्यासी’ लाई राखिएको छ ।
शान्तिरुपा बराहथाेक तमु समाजकाे अध्यक्षमा बुद्धि वहादुर गुरुङ
डागर स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा खाद्यान्न सहयोग
पोखरा । एभरेष्ट प्रिमियर लिग नजिकिंदै छ । टी–२० फर्मेटमा नेपालकै प्रतिष्ठित यो प्रतियोगिताको उपाधी यसपटक कसको पोल्टामा जाला त ! क्रिकेट प्रेमीहरु व्यग्रताका साथ प्रतिक्षामा रहेका छन् । प्रतियोगिताका सहभागि सबै टिमहरुले यो उपाधी कब्जा गर्न आ–आफ्नैं रणनीति बनाउँदै छन् । विभिन्न टिमहरुले विश्वविख्यात क्रिकेटरहरुलाई आ–आफ्नों टिममा अनुबन्धन गराइरहेका छन् । प्रतियोगिताका लागि दिनहुँ […]
कास्की । नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत कास्की प्रदेशनिर्वाचन क्षेत्र नं ३ ख को सभापतिमा दीपक विर कुँबरले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । पोखरा महानगरपालिका–६ बैदाम निवासी ५० वर्षीय कुँबरले क्षेत्रीय सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन र युवाहरुलाई नेतृत्वमा अगाडि ल्याउने कार्यक्रम सहित आफूँले उम्मेदवारी दिने बताउनुभयो । सभापतिका प्रत्यासी कुँबरले […]
पाेखरा। शान्तिरूपा बराहथोक तमु समाजको २०औं वार्षिक साधारण सभा तथा १०औं अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। अधिबेशनले क्याप्टेन बुद्धि बहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा नौ सदस्सीय नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ। समितिको उपाध्यक्षमा बिमला गुरूङ, सचिवमा हेमराज गुरुङ, कोषाध्यक्षमा सुवेदार गगनसिंह गुरुङ र सह- सचिवमा काशीमाया गुरुङ चयन भका छन्। त्यसैगरी सदस्यहरूमा रूपसरी गुरुङ, लक्ष्मी गुरुङ […]
पोखरा । डागर स्मृति प्रतिष्ठानले विपन्न बालबालिकाका लागि खाद्यान्न सहयोग गरेको छ । प्रतिष्ठानले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत पोखरा १७ बिरौटामा महानगरद्वारा संरक्षित बालश्रम न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतका विपन्न विद्यार्थीलाई २५ हजार तीन सय बराबरको खाद्यान्न सहयोग गरेको हो । सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रमका लागि प्रतिष्ठानका सदस्य आभा जोशीबाट पाँच हजार पाँच सय, संस्थापक अध्यक्ष हिरा बास्तोलाबाट […]
प्रगती आमा समुहको चौथौं साधारण सभा सम्पन्न
पोखरा । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ८ स्थित प्रगती आमा समुहको चौथौं साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको उद्धघाटन गर्दै पोखरा वडा नं. ८ का वडा सदस्य कृष्णमान ठुसाजुले छोटो समयमै आमा समुहले वडा भित्रका आमा दिदि बहिनीलाई एकिकृत गराएर विभिन्न सामाजिक कार्यमा सर्मपित भएकोमा प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले वडा नं.८ भित्र बहुउद्देशिय सामुदायिक […]
गण्डकी प्रदेशमा मनाइयो संविधान दिवस
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले विविध कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइएको छ । प्रदेश मुल समारोह समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमै आइतबार विषेश समारोह गरेको छ । यसअघि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकीले वृहत अन्तक्रिया गरेको छ । आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले वर्तमान संविधानले सामन्ती, निरंकुश र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद […]
बजार अनुगमनलाई व्यवहारिक गराउँदै कार्वाही प्रक्रियाको कार्यन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य मन्त्री शर्माको निर्देशन
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्माले बजारमा हुने गरेको अनुगमनलाई व्यवहारिक गराउँदै अनुगमन र कार्वाही प्रक्रियाको कार्यन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरेका छन् । नजिकिदै गरेको चाडवाडलाई लक्षित गर्दै सुपथ मूल्य पसलहरुलाई ग्रामिण भेग लक्षित गरेर सञ्चालन गर्नु पर्नेमा बताउँदै वाणिज्य मन्त्री शर्माले प्रदेश भित्रको खाद्य सुरक्षा […]
गण्डकी प्रदेश आम सञ्चार विधेयक फिर्ता लिन महासंघ गण्डकीको ध्यानाकर्षण
पोखरा ।नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले गण्डकी प्रदेश सभामा पेश भएको गण्डकी प्रदेश आम सञ्चार विधेयक तत्काल फिर्ता लिन प्रदेश सरकारसंग आग्रह गरेको छ । बिहीबार गण्डकी प्रदेशका कानून सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापालाई ज्ञापनपत्र दिँदै उक्त विधेयकलाई तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । प्रदेश समितिले पेश गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा […]
पोखरामा विस्तार हुदै क्यालिस्थेनिक्स
पोखरा । पोखरामा क्यालिस्थेनिक्स व्यायाम विस्तारै हुदै गएको छ । क्यालिस्थेनिक्स एक प्रकारको व्यायाम हो । यसमा पोखरा युवाहरु विस्तारै एक भएर आगडी बढ्न थालेका छन् । युवाहरुले बारस्वाड नेपाल क्लब नै बनाएर व्यायाम लागेका छन् । उनीहरुले यस्ता व्यायाम गर्ने क्यलिस्थेनिक्स पार्कहरु पनि निमार्ण गर्दै अगाडी बढेका वारस्वाड नेपालका अध्यक्ष जस्पर गुरुङले जानकारी दिए […]
पत्रकारमाथिको आक्रमणको प्रेस युनियन कास्कीको निन्दा
पोखरा । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका सदस्य रञ्जन अधिकारी, र नेपाल प्रेस युनियन कास्कीका सदस्य समेत रहेका पत्रकार प्रल्हादचन्द्र घिमिरेमाथि भएको हातपात तथा दुव्यर्वहारको घटनाप्रति नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले घोर भत्र्सना गरेको छ । प्रेस युनियन कास्कीका अध्यक्ष नवीन सिग्देल र सचिव प्रदीप पौडेलद्वारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा जागिर लगाइदिने भन्दै लाखौं रुपैयाँ ठगी गरेको […]